Index of contents in geofumadas
Ny tsara indrindra amin'ny 2012 ao Geofumadas
Hifarana amin'ity taona ity, ity lahatsoratra ity dia mamoaka lahatsoratra miavaka roa isam-bolana. Na dia te-hanao vazivazy tamin'ny andron'ny April Fool tsara toa ny taona maro aza aho, ny fialan-tsasatra dia nandany fotoana ny fianakaviako, niezaka ny hahazo hery indray ho an'ny taona vaovao izay azo antoka fa hitaky be. Ny sasany amin'ireo firaketana ireo dia misy ...
jeospatial - GIS, LOHA HEVITRA RAKETIN'NY
Rasta avy amin'ny Geofumadas ao anatin'ny volana maherin'ny 75
Rehefa afaka herintaona sy tapany nahaleo tena teo ambany sehatry ny Geofumadas.com, nahatratra 70,000 mahery ny isan'ny isam-bolana azonay. Be dia be izany ary ho an'ireo izay manaraka ity tranokala ity hatramin'ny niorenany dia ho hitany fa amin'ny fotoana vitsy dia vitsy ireo zavatra izay nisy fanovana mahery vaika, fa nisy kosa ny olana notohizana. Izaho manokana, aorian ...
LOHA HEVITRA RAKETIN'NY, My egeomates
Rehefa afaka 50 volana mahery ny nanoratanao dia famintinana ity. Raha jerena voalohany, na dia nifototra tamin'ny fijerin'ny pejy aza ny fifantenana, ny taratra dia: 13 dia misy ifandraisany amin'ny AutoCAD na ireo fampiharana mitsangana. Lohahevitra iray izay naharitra, anisan'ireo vaovaon'ireo kinova vaovao, fampiasana azo ampiharina amin'ny sivily ...
Featured, LOHA HEVITRA RAKETIN'NY, My egeomates
Lisitry ny rindrambaiko noheveriko
Vao haingana aho no niresaka momba ny dikan'ny statistika miresaka momba ny rindrambaiko, indrindra ny programa 11 izay maneho ny 50% amin'ny fitsidihana amin'ny teny lakile. Sarotra ny manome tolo-kevitra hoe iza amin'ireo rindrambaiko no tsara kokoa, satria miankina amin'ny toe-javatra (sy ny vola) samihafa, ny tsara indrindra antenaiko dia ny manoratra sy manome ny hevitro; ...
Bentley Systems Blog sivily 3D dwg Google Earth gvSIG OS samy hafa GIS Ny fahatsapana voalohany QGIS
jeospatial - GIS, LOHA HEVITRA RAKETIN'NY, My egeomates